आकर्षक स्लिम फिगरका लागि घरेलु टिप्स | Glamour Nepal
के तपाईको पेट लागेको छ ? अर्थात् बोसोको कारण पेट ठुलो भएको छ ? त्यसो हो भने निम्न कुरामा ध्यान दिनुस् र आफ्नो फिगर आकर्षक स्लिम बनाउनुस।
कागती पानी : तातो पानीमा कागतीको थोरै रस र नुन मिसाएर हरेक दिन बिहान सेवन गर्नुहोस् । यसबाट तपाईंको मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्नमा पनि मद्दत मिल्छ।
काँचो लसुन: बिहान काँचो लसुन खाने बानी गर्नुहोस्। बिहान लसुनको दुई या तीन पोटी चपाएपछि तातोपानीमा कागती हालेर पिउनाले बोसो घटाउन मद्दत गर्छ। यसबाट शरीरको रक्तप्रवाह पनि सुचारु हुन्छ। यसले शरीरलाई निकै फाइदा पनि गर्छ।
बदाम : बदाममा भिटामिन इ तथा प्रोटिनका अलावा फाइबरको मात्रा अधिक मात्रामा हुन्छ। यसको सेवनले पेट लामो समय सम्म भरिएको अनुभूति हुन्छ। यसमा क्यालोरीको मात्रा बढी भएपनि मोटाई भने बढाउँदैंन।
पानी: पेटको बोसो काम गर्न धेरै पानी पिउनुहोस्। यो निकै लाभदायी हुनेछ। नियमित अन्तरालमा पानी पिउनाले मेटाबोलिजम बढ्छ र शरीरबाट विषालु पदार्थ बाहिर निस्कनमा मद्दत गर्छ। यसबाट शरीर स्वस्थ रहन्छ।
गुलियो : यदि तपाईं पेटको बोसो कम होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने मिठाईबाट टाढा रहनुहोस्। मिठाई तथा तैलीय पदार्थबाट टाढा रहनुहोस्। यस्ता खाद्य पदार्थले शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा गर्छ। यस्तो बोसो पेट, तिघ्राजस्ता शरीरका विभिन्न भागमा जम्मा हुने गर्छन्।
खैरो चामल (ब्राउन राइस) : यदि तपाईं भात खानमा सोखिन हुनुहुन्छ भने सेतो चामलबाट टाढा रहनुहोस्, त्यसको स्थानमा खैरो चामलको भात खानुहोस्। यसका अलावा आफ्नो खानामा ब्राउन ब्रेड, ओट्सजस्ता खाद्य पदार्थ सामेल गर्नुहोस्।
मासु : मांसाहारी भोजनमा बोसोको मात्रा निकै हुन्छ। यो बोसो शरीरमा जम्मा हुन्छ, जसबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन्। यदि वास्तवमै तपाईं तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने मांसाहार छाडेर शाकाहारी भोजन गर्नुहोस्।
सागसब्जी : खानामा फल र सागसब्जी सामेल गर्नुहोस्। बिहान बेलुकी एक कचौरा फल र सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। यसबाट तपाईंको पेट भरिन्छ र एन्टीअक्सिडेन्ट, मिनरल्स र भिटामिन पनि प्राप्त हुन्छ।
खाना पकाउने तरिका : खाना पकाउँदा तौल बढाउने खालका मसला पनि प्रयोग नगर्नुहोस्। दालचिनी, अदुवा तथा मरिचको प्रयोग खानामा अनिवार्य रुपमा गर्नुहोस्। यी मसाला स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। यसले तपाईंको इन्सुलिन क्षमता बढाउँछ र चिनीको मात्रा पनि कम गर्छ।
तीन करोड लगानी गर्दै १५ सय वर्ष अघिको कथामा फिल्म निर्माण हुने
निश्चलको आर्मी र दयाको प्रहरी लुक्स । हेर्नुहोस् ‘झुम्की’ ट्रेलर
रातो केरा : मुटु सम्बन्धीका बिरामी र डायबिटीजका बिरामाीलाई लाभदायक